Basudhara - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguChaitali
Indawo yokuzimela ifumaneka ngokufanelekileyo, ukujula kwelitye zombini ukusuka kwi-Ashram eyaziwayo kunye ne-Sonajhuri Haat. Ikufuphi kakhulu nesikhululo sikaloliwe sasePrantik. Ivalelwe phakathi kohlaza oluthozamisayo kunye negadi eluhlaza, ilungele ukubaleka ngempelaveki, nazo zonke izinto eziluncedo zale mihla, kubandakanya i-ATM kunye nentengiso kanye kumnyango wayo.
Igumbi lokulala elikumgangatho ophezulu liza negumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo kunye nendawo yokuhlala yabucala / indawo yesidlo sakusasa, ezinokuthi zisetyenziswe ziindwendwe kuphela. Ikwanayo nekhitshi elincinane abanokulisebenzisa xa belungiselela ukutya. Igumbi lokulala livula i-terrace apho iindwendwe zinokusebenzisa.
4.92 · Izimvo eziyi-78
I-Basudhara isondele kakhulu kwi-Shantiniketan Ashram kunye neYunivesithi yaseViswa Bharati. Ihlathi laseKhowai kunye neSonajhuri nalo likufuphi. Abakhenkethi abadumileyo kunye nomtsalane wenkolo iTarapith kukuhamba kweyure ukusuka kwindawo. Idolophu yaseBolpur inokufikelelwa kwisiqingatha seyure.
Umbuki zindwendwe ngu- Chaitali
Ndifumaneka nanini na efowunini, i-imeyile kunye neetekisi. Andihlali eBasudhara ngalo lonke ixesha, kodwa inokufikelelwa ngokulula ukuba kukho imfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Syambati